Turkiga oo sare u qaaday weerrarka uu ku hayo gobolka Idlib ee waddanka Suuriya | Xaysimo
Home War Turkiga oo sare u qaaday weerrarka uu ku hayo gobolka Idlib ee...
Turkiga oo sare u qaaday weerrarka uu ku hayo gobolka Idlib ee waddanka Suuriya
Turkiga ayaa Axaddii waxa uu soo riday laba diyaaradood oo nooca dagaalka ah xilli uu dalkaas sare u qaaday howlgalka milateri ee ay ka wadaan waqooyiga Suuriya.
Duuliyayaasha ayaa si badqab ah waxa ay diyaaradaha uga boodeen baarashuut samada gobolka Idlib, halkaas oo ciidammada Turkiga iyo kuwa fallaagada ay la dagaalamayaan ciidammada dowladda Suuriya.
Turkiga oo mucaaradka baritaaraya ayaa sheegay in sidoo kale uu bartilmaameedsaday hannaanka difaaca cirka ee Suuriya iyo tobannaan taangiyo.
Xiisadda ka taagan Idlib ayaa cirka isku shareertay tobaadkii la soo dhaafay kaddib markii 33 ciidammada Turkiga ah lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah.
Weerrarkaas ayaa waxa uu dhaliyay cabsida laga qabo in xaaladda ay faraha ka baxdo oo uu halkaas dagaal culus ku dhexmaro Turkiga iyo dalka Suuriya milateriga ka taageera ee Ruushka.
Hasayeeshee, Axaddii, Wasiirka Gaashaandhigga ee waddanka Turkiga, Hulusi Akar, ayaa sheegay in dalkiisa uusan doonayn inuu dagaal la galo waddanka Ruushka.
“Waxaan ka filaynaa Ruushka inuu joojiyo weerrarada maamulka Suuriya,” ayuu ku yiri bayaan taleefishinka laga akhriyay. “Ma doonayno oo maskaxdayada kuma jirto inaan dagaal la galno Ruushka.”
Mr Akar ayaa ku tilmaamay howlgalka ka dhanka ah milateriga Suuriya mid “Halista loogaga hortagayo”. Waxa uu sheegay in ay burburiyeen diyaarad aanay cidina wadin, sideed diyaaradaha qumaatiga u kaca ah, 103 taangi, iyo aalad madaafiicda laga soo gano iyo qalab kale oo milateri.
Waxa uu intaasi ku daray in 2,212 askari oo ka tirsan ciidammada Suuriya la dilay, la dhaawacay ama nolosha lagu qabtay.
Hasayeeshee hay’adda la socota xuquuqda aadanaha ee Suuriya ee uu fadhigeedu yahay waddanka UK ee dagaalka la socota, ayaa sheegtay in tan iyo 27-kii Febraayo la dilay 74 askari oo ciidammada dowladda Suuriya ah iyo dagaalyahannada gacansaarka la leh Dimishiq.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay xumeeyeen xiriirkii ka dhaxeeyay Ankara iyo Moscow. Balse madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la filayaa in todobaadkan uu la kulmo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.
Dhanka kale, Midowga Yurub ayaa waxa ay ku baaqay kulan degdeg ah oo ay yeeshaan wasiirrada arrimaha dibadda si ay colaadda taagan uga wadahadlaan.
Ciidammada dowladda Suuriya oo uu Ruushku taageerayo, ayaa waxa ay iskudayayeen inay kooxaha jihaadiga ay dib uga qabsadaan gobolka Idlib iyo fallaagada uu Turkigu taageero.
Idlib waa gobolka ugu dambeeya ee kooxaha mucaaradka Suuriya ay weli dhul wayn ka haystaan.
Ruqaansiga dowladda Suuriya ayaa waxa uu sababay barakaca ku dhawaad hal milyan oo qof oo rayid ah kuwaas oo u qaxay meel u dhaw xadka Turkiga. Turkiga ayaa sheegay in markii horaba ay martigalisay malaayiin qaxooti ah oo misana aanay hayn khayraadkii ay kuwa kale ugu ogolaan laheyd inay dalkeeda galaan.
Turkiga ayaa tan iyo 2018 waxaa gobolka Idlib ka joogay ciidammo badan xaaladda la socday kuwaas oo meesha ku joogay heshiis ay wadagaleen Turkida iyo Ruushka. Madaxweyne Erdogan ayaa goor hore ku goodiyay in dagaal la gali doono ciidammada dowladda Suuriya haddii aanay dib uga guran deegaannada u dhawdhaw goobaha ay ciidammada Turkiga kala socdaan xaaladda.
Weerrarka todobaadkii hore lagu soo qaaday ciidammada Turkiga ayaa yimid kaddib markii fallaagada uu dalkaas baritaaro ay qabsadeen magaalada muhiimka ah ee Saraqeb, ee dhacda waqooyi bari Balyun. Ruushka ayaa iska fogeeyay in ciidammadiisu ay ku lug leeyihiin dagaalka ka soconaya deegaanka Balyun.
Hasayeeshee Ruushka iyo Turkiga ayaa waxa ay la kala safan yihiin labada dhinac ee isku haya colaadda Suuriya. Turkiga ayaa waxa uu ka soo horjeedaa dowladda Bashar al-Assad oo waxa uu taageeraa kooxaha fallaagada.
Ruushka ayaa diiday baaq kaga yimid Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo lagu dalbanayay in waqooyiga Suuriya laga sameeyo xabbad joojin bini’aadamnimo, isagoo sheegay in xalka kalilya uu yahay in dalka laga saaro waxa uu ugu yeeray argagixisada.
Dowladda Suuriya oo si joogta ah loogu eedeeyay inay gaysato tacaddiyo ka dhan ah shacabka, ayaa sheegtay inay Idlib ka xorraynayso “argagixisada”.
Madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka ayaa Jimcihii waxa ay ku wadahadleen khadka taleefanka. Labadooduba walaac ayey muujiyeen waxayna isla garteen in loo baahan yahay “sharaxaad dheeraad ah oo ku saabsan sababta Turkigu uu aad faraha ugula galay arrinta Suuriya?